A na-eji ọla nchara na-agbaze igwe anaghị agba nchara, usoro a na-eji arụ ọrụ dị mma. Mgbe ha hapụsịrị ụlọ ọrụ ahụ, a na-edenye ha ọtụtụ nyocha siri ike. Ha dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi ma nwee ikike mgbochi nkwụ na ike siri ike ma na-adịgide. Ngwaahịa ahụ nwere ọdịdị mara mma, ọrụ dị mfe, torch free na torque n'ozuzu. Ọnụ ọnụ nke sooks ahụ dọrọ aka dị mma ma ọ dịghị afụ ụfụ ahụ. A na-emegharị ya ka ọ dị mma ma nwee ike ijigha ọkpọkụ ahụ. Ya mere, igwe anaghị agba nchara na-ejikọ ọnụ maka njikọta nke ọkpọkọ dị nro ma jụọ ya, a na-ejikwa ya n'ọtụtụ ebe na mmanụ, uzuoku na mmiri mmiri na ngwaọrụ dị iche iche dịka ụgbọ ala, traktọ, ụgbọ mmiri, mmanụ ọkụ, injin mmanụ,. Ndị na-adọwa mmiri, na ndị na-ewu connectionlọ Mgbakwunye na-akwa mmiri, wdg, bụ nke mbụ n'ime ụdị njikọta hose.
Ọtụtụ usoro ntinye nke sooks clamps
Installationzọ nrụnye ziri ezi: Ekwesịrị ịkụnye mkpọchi ọnụ dabere na ọnụ ahịa iyi nke ndị nrụpụta tụrụ aro ya.
Usoro nrụnye na-ezighi ezi
1. Ọ bụ ezie na apịtị na-agbagharị ọnụ nwekwara ike ịgbaghari ya ka ọ bụrụ ọnụ ahịa dabara adaba, nkwonkwo ahụ na-agbasa ga-arụ ọrụ n'okpuru nrụgide, nke ga-eme ka mkpọchi mmiri ahụ dapụ na ọnụ ọnụ ma mechaa mee ka mma na-agbaze.
2. Ọ bụ ezie na apịtị na-agbagharị ọnụ nwekwara ike ịgbagọ n'oge kwesịrị ekwesị, mmụba hose na ịma jijiji mpaghara ga-eme ka ọsụsọ ahụ kwagharia, na-eme ka mma na-agbaze.
3. Agbanyeghi na a na - emekwa ka ochikota onu ogugu, nwepu, mmachi na uda nke obodo a ga --eme ka okpokoro a na - agha ike, o ga - emebikwa ovu. Semịaka ahụ na-aga n'ihu na-ama jijiji ma mechaa mee ka ọkpụkpọ ahụ na-agbaze.